किरात प्रदेशमा किन निर्णय ? - Sagarmatha Online News Portal
Sunday July 21, 2019 |
किरात प्रदेशमा किन निर्णय ?
२२ बैशाख २०७६, आईतवार
किरात प्रदेश नामाकरण गरेर राईको ईतिहास बचाउने की हिन्दुको ? प्रदेश एकको सवालमा यहाँका जनप्रतिनिधि देखि अधिकांश नागरिकहरु दुविधामा छन् । जनप्रतिनिधिमा डर पनि छ की आज एउटा नाम प्रस्ताव ल्याउँला भोली जनताले तिरस्कार गर्ने पो–हो–की ? यस्तै–यस्तै अनुत्तरित कौतुहलले भरिएर आज प्रदेश नम्बर एक बेनामे भएर बसिरहेको छ । प्रदेश एकको नामाकरण गर्ने विषयमा भ्रम र यथार्थ, केही उदाहरण, असर, र विकल्प बारे यहाँ चर्चा गर्रौ ।
नेपालको पुर्वी भेगमा पुरानो बसोवास रहेको किरात समुदाय भनेर चिनिने विभिद जातिहरु राई, लिम्बु, सुनुवार, याक्खा र अन्य छन् । यी अधिकांशले एक नम्बर प्रदेशको नाम किरात भए मेरो पहिचान र ईतिहास जोगिरहने छ भन्ने विश्वास लिन्छन् । कतिपयले सोँचेका छन्, नाम भएपछि सवैमा किरातीको अधिपत्य हुने विश्वास लिन्छन् । त्यसैगरी किरात जाति भित्र नपरेको ठान्ने अन्य अधिकांशले किरात नाम भएपछि हाम्रो अधिकार संकटमा पर्छ, त्यसैले कसैको पनि ईतिहास नखुल्ने अमुक नाम दिउँ भन्ने दाउपेचमा तल्लिन छन् । ईतिहास खुल्ने नाम दिँदैमा कसैको अधिकार खोसिएला त ? अमेरिकाको उदाहरण हेरौ डाकोटा, मिसौरी, मिनिसोडा, उथा र अरु धेरै राज्यहरुको नामांकन त्यहाँका आदिवासीको साना–साना पुरानो देशको नाम बाट समेटिएको छ । यसले अमेरिकाको ईतिहासलाई बुझाउन सजिलो भएको छ । के त्यहाँ नाम राख्दैमा बाहिरबाट आएकाहरुलाई अपमान भएको छ ? उनिहरुले गोराहरुलाई लखेटे त ? अमेरिका मात्र हैन संसारको कुनैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले आपसमा विभेद गर्ने भन्ने अहिलेको युगमा अकल्पनिय छ । त्यहाँ यतिमात्र हो आदिवासीहरुलाई गाँस, वास, कपास, रोजगार लगायतमा भने सहुलियती छ । त्यो त नेपालले पनि सुरु गरिसकेकै छ ।
किरातको यथार्थ के हो त ? सर्व प्रथम किरात शब्द कहाँ बाट उत्पत्ति भयो ? यस बारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । धेरै ऐतिहासिक नामहरुमा दुविधा भएपनि किरातमा समानता छ । तथापि अधिकांशलाई थाहा छैन, किराती सब्द कसरी स्थापित भयो भनेर । किरात सब्द वास्तवमा किरातीको न मुन्दुममा छ , न यो उनिहरुको ईच्छा थियो । किराती भनिएको समुदायको मुन्दुममा त यलखोम छ । त्यसोभए यलखोम राज्य खोज्नु पर्नेथियो, किन किरात स्वीकार्न तम्सियो त ? यसमा प्रष्ट जवाफ एउटै मात्र छ, किरात सब्द हिन्दुकै उपज हो । हिन्दुको ईतिहास वा शास्त्रले किरातीको देश भनेर यलाखोमलाई अर्को नाम दियो । जसरी बेलायती सरकारले भारतलाई ईन्डिया नामाकरण गरेपछि कालान्तरमा उसको नाम ईन्डिया भनेर चिनाउन बाध्य भयो । त्यसरी नै यलाखोमवासीले अहिले आफुलाई किरात भनेर चिनाउन बाध्य भएको हो । ईण्डिया नामको ईतिहास दुईसय वर्षको मात्र हो । तर हिन्दुको शास्त्र अनुसार किरातको ईतिहास सत्य युग देखिको निरन्तर छ । यती लामो ईतिहास बोकेको नेपालमा किरात भन्ने प्रदेशको नाम सम्म रहेन भने हिन्दुको बेद शास्त्र पनि गलत छ भन्ने आधार हुने छ । हिन्दुको गलत ईतिहासको एउटा उदाहरण, राम जन्मिएको भनिएको अयोध्यामा उत्खनन् पछि पत्ता लागेको छ । उत्खनन्ले त्यहाँ सवै बौद्ध सम्बन्धि मात्र प्रमाणहरु फेला परेपछि हिन्दुहरुमा तरंग छाएको छ । के हिन्दुले ब्याख्या गर्ने किरात पनि यस्तै गलत हो ? हैन भने खासमा हिन्दुहरुको लागि किरात प्रदेश हुनु सुनौलो मौका हो । यहाँ कुनै प्रमाण जुटाउनु जरुरी पनि छैन ।
यहाँ किरातको विकल्पमा गरमाथा वा कोशी भनेर पनि प्रचारमा ल्याईने गरेको छ । सम्भब हरेक शब्दमा हुन्छ, तर यसको ऐतिहासिक प्रमाणिकरण ईतिहासलाई कसरी गराउने ? भविष्यमा ईतिहास कसरी थाहापाउने ? यसबारे राजनीति गर्नेले ध्यान दिनु पर्छकी पर्दैन ? कोशी र सगरमाथा दुवैको नामाकरण गरिएको ईतिहास हेर्ने हो भने ८० देखि १०० वर्ष भन्दा पर छँदै छैन । मानौं, यी मध्ये एकको नामाकरण भयो तर नामाकरणले के अर्थ दियो त ? यसमा हामी सवै अनुत्तरित छौं । जहिल्यै कुहिरोको काग जस्तो हुने ? अव अनुत्तरित हुनुहुँदैन कोशी र सगरमाथा जतिबेला नामाकरण भयो त्यो भन्दा पहिले त्यहाँ अर्कौ नाम थियो । कोशीलाई वालाम्ता र सगरमाथालाई चोमोलुङ्मा यलखोमबासीले भन्दथे र अहिले पनि चलनमा छ र जसले अध्यायन गरिरहेका छन् उनिहरुलाई पनि थाहा छ ।
कोशी नामको अर्थ र सम्भावना बारे चर्चा गरौं । कोष (सानो ईकाई) सँग शी शब्द समास गरेर कोशी शब्द हुन्छ । यसले नदीको नाम वा भुगोलको नाम भनेर खास अर्थ दिँदैन तर अंग्रेजीमा अयबकत (कोष्ट्, कोष्टी)को अर्थ समुद्र क्षेत्रको भुभाग र शी भनेको समुद्र हुन्छ । नेपालसंग अंग्रेजको सम्बन्ध दुई सय वर्ष ज्यादा लामो छ । यो अवधिमा उनिहरु कोशी नदी धेरै तरेका छन् । नेपालमा समुद्री भाग नहुँदा कुनै अंग्रेज कुटनितिज्ञले कोशीलाई देखेपछि कोष्ट्–शी भनेको हुनु पर्छ । यो नै नेपालीले पछि कोशी भनेर चिनाएको हुन सक्छ । आजकाल अधिकांश नेपालीले कोशीको अर्थ ठूला नदिहरु भन्ने बुझ्नुले पनि कोशी नामले एक नम्बर प्रदेशको नदी वा क्षेत्रलाई मात्र समेट्दैन । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा धेरै टाढाको ठाउँलाई ईङ्गित गर्दा पनि कोश भन्ने गरिन्छ । काठमाण्डौं वस्ने वा सर्वसाधारणले पुर्वी भेगलाई टाढा भनेर चिन्न पनि कोशी नाम गरेको हुन सक्छन् । अर्को सम्भावित कोशी संग मेल खाने नाम काँशी छ । यो भारतको एतिहासिक शहर जसलाई नेपाली हिन्दुले पनि सम्मान गर्छन । त्यसैलाई सापटी ल्याएर नेपालमा नामांकन गर्न खोजेको भए त्यो पनि प्रष्ट उल्लेख गर्नु पर्छ । मानौं भारतमा गोर्खाल्याण्ड राज्य माग भैरहेको छ । गोर्खाल्याण्ड शब्द नेपालीसंग जोडिएको भनेर उनिहरुले प्रष्ट खुलाएका छन् । फरक सत्य यती हो गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरु त्यहाँका पहिलो बासिन्दा हुन् । तर काँशीलाई मान्नेहरु आयातित हुन् ।
केही भारतको राज्यहरुसंग तुलना गरेर पनि नेपालमा प्रदेशको नामाकरण लाई सहज बनाउन सकिन्छ । धेरै उदाहरण मध्ये केही लियौं । भारतमा आशाम राज्यको नाम ब्रम्हपुत्र किन हुन सकेन ? विहार किन घागरा वा गंगा प्रदेश भएन ? वा कस्मिर किन लद्दाख हिमालको नामबाट राखिएन ? किनकी आशाममा आसामीको ईतिहास राख्नु छ, विहारमा बौद्धको ईतिहास बचाउनु छ, कस्मिरमा मुस्लिमको ईतिहास राख्नुछ । विहार राज्य जहाँ भनिएको छ त्यो बुद्धको विहारहरुलाई संरक्षण गरेर राखेकाले विहार नामांकन भएको हो । आश्चर्य के छ भने विहार राज्यमा एक प्रतिशत पनि बौद्ध धर्मावलम्भीहरु छैनन् । भारतको यो उदाहरणले के पुष्टि हुन्छ भने नदीको नाम नदीसंगै वा पाहाडको नाम पाहाठड संगैछ, राज्यको लागि अर्को नाम हुन जरुरी छ । जसले त्यहाँको ईतिहासलाई वचाईराखेको होस् । सगरमाथा नाम कसरी रहयो यसको ऐतिहासिकता के हो अधिकांशलाई ज्ञन छ । सगर को अर्थ आकाश माथा को अर्थ शिर समास गर्दा सगरमाथा भयो । अर्थपुर्ण नाम भएपनि यो नाम स्वीकार्य हुन्न । किन हुन्न भन्ने एउट उदाहरण, चार्लेस बाबागेले कम्प्युटर बनाए, कम्प्युतटरलाई नेपालीले स्वचालित मेसिन भनेर बुझाउन सकिन्छ तर नाम दिन मिल्दैन । तात्पर्य बाबुराम आचार्यले सगरमाथा भनेको नाम राख्न उनको कुनै योगदान छैन ।
अन्तमा, सगरमाथा वा कोशी जस्ता नाम राखिएमा यसको नकारात्मक असरहरु प्रसस्ती हुनेछन् । सर्वप्रथम कोशी वा सगरमाथा नामको अर्थ कसैले प्रष्ट बनाउन नसक्नु, दोश्रो पुरानै राजाकै प्रदेश त आयो भन्ने हिनता बोध हुनु, ईतिहास तोडमोड गराएकाले आत्मग्लानी हनु जस्ता नकारात्मक असरहरु पर्नेछन् । यस्ता कथा विनाको प्रदेशको नामको गाथा जनताले कहिल्यै गाउने छैनन् । अर्थ विनाको राज्यको नाम आएमा किरात जन्य संगठन र पहिचानवादी संगठनहरुले रुष्टता पोख्नेमा दुविधा छैन । दल भित्रै बाट समेत यस्ता अर्थनवर्थको नाम विरुद्ध आवाज उठाउने प्रष्टै देखियो । यसले एक नम्बर प्रदेशमा राजनीतिमा असहज हुने निश्चित छ । असहज राजनीतिले हरेक विकासमा बाधा पुर्याउँछ । त्यसकारण, भ्रममा नपरी, यथार्थको पक्षमा प्रदेश संसदले निर्णय लिनुको विकल्प छैन । नेपालको सवैभन्दा पुराने ईतिहास किरात प्रदेश नामाकरण गर्नमा गर्व गरौं । यसका लागि सवै जनताले खवरदारी गर्नुको विकल्प छैन । कसैलेपनि मुख्यमंत्री वा सभामुदको मुख नताक्नुस् । उनिहरु अन्तिममा विकल्प दिने मात्र हुन् । फेरिपनि, डिजिटल जमानामा नेपाली मात्र हैन विदेशीले समेत संसारको कुना–कुनामा बसेर नेपाली बारे अध्यायन गरिरहेका छन् । किरात प्रदेश नामाकरण गर्ने अवसर पाएर पनि नामाकरण भएन भने किरात प्रदेशको माग हराउनेवाला छैन । कालान्तरले किरात प्रदेश नामाकरण गराउन सक्छ । कालान्तर सम्म तपाईं एकनम्बरको जनप्रतिनिधि साँचिकै एकनम्बरमा सम्मानित हुने कि अपमानित ? स्वतन्त्र विचार गरी निर्णय लियौं ।
Published On: २२ बैशाख २०७६, आईतवार 559पटक हेरिएको
यसरी बन्छ समृद्ध सिद्धिचरण
औचित्यपूर्ण होस्, सगरमाथा दिवस
स्थानीय स्रोतमा आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच
काँडाघारीबाट उपत्यका इन्चार्ज लामा पक्राउ
आतङ्क मच्चाउने जस्ता गतिविधि अस्वीकार् मन्त्री बाँस्कोटा
देशको केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
परीक्षा विथोल्न खोजेको आरोपमा चार पक्राउ
नेकपा सोलुखुम्बु इञ्चार्जमा हेमकुमार राई ‘सुरवीर’, को को भए प्रदेश १ मा ईञ्चार्ज र सहईञ्चार्ज हेर्नुहोस नामसहित !
समाचार तथा विज्ञापनको लागी : ९८४२९३०१९७
सूचना विभाग द.नं. ०८७/०७३-७४
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ५, सल्लेरी सोलुखुम्बु ।